‘आफूसँग भएको पैसा बढाउने आइडिया लिन बैंकिङ एक्स्पोमा आउनुहोस्’ Bizshala -
नेपालद्वारा २०% जनसंख्यालाई पुग्ने खोप ल्याउने तयारी प्रारम्भ
घट्न थाल्यो कोरोना संक्रमणको गति, निको हुने दर ९४% नजिक
सिटिजन्स बैंकको ११% लाभांश साधारणसभाबाट पारित
प्रभू लाइफको ५४ लाख कित्ता आइपीओ मंसिर २९ देखि निश्कासन हुने
‘आफूसँग भएको पैसा बढाउने आइडिया लिन बैंकिङ एक्स्पोमा आउनुहोस्’
माधव निर्दोष, कार्यक्रम संयोजक : बैंकिङ एक्स्पो–२०१७ तथा अध्यक्ष :मिडिया इन्टरनेशनल
देशमै पहिलोपटक शुक्रबारदेखि तीन दिने बैंकिङ एक्स्पो सुरु गर्नुभएको छ, कस्तो छ जनसहभागिता ?
नेपालमा नै पहिलोपटक बैंकिङ एक्स्पो सुरु भएको छ । हिजो पहिलो दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले कार्यक्रमको भव्य समारोहका बीच उद्घाटन गर्नुभयो । कार्यक्रममा बैंकर्स, विद्यार्थी लगायत अन्य थुप्रै सर्वसाधारणहरुको उल्लेख्य सहभागिता रह्यो । खासमा पैसाको आवश्यकता हुनेहरु, पैसाको बचत गर्न तथा परिचालन गर्न नजानेर समृद्ध बन्न नसकेकाहरुको उत्साहप्रद सहभागिता रहेको छ । बैंक तथा बैंकिङ सेवा, सेयरबजार लगायतबारे जान्न चाहनेहरुको यो उत्साहजनक सहभागिता देख्दा खुसी लागेको छ । बाँकी दिनहरुमा अझै बढीको सहभागिता हुने अपेक्षा गरेको छु ।
एक्स्पोको उद्देश्य के हो ? बैंकिङ एक्स्पोको आयोजना गर्ने सोच कसरी आयो ?
नेपालमा बित्तीय साक्षरताको कमी छ, मानिसमा पैसा कमाउने, बचत गर्ने तथा लगानी गर्नेसम्बन्धी ज्ञानको कमी छ । यिनै कुराहरुलाई मध्यनजर गरी मैले बैंकिङ एक्स्पो आयोजना गरी जनताले चाहेको र आजको एकदमै आवश्यकताको विषय रहेको बैंकिङ तथा वित्तीय जानकारी दिने सोच बनाएँ । मेरो यो सोचमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, रेमिट्यान्स कम्पनीहरु, बीमा कम्पनीहरु, मर्चेन्ट बैंकरहरु लगायत पैसा तथा पैसाको कारोबारसँग जोडिएका सबै संस्थाहरुको साथ मिल्यो । खासमा कृषि, व्यवसाय तथा व्यवस्थापन अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमा नै उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने उद्देश्य लिएर हामीले बैंकिङ एक्स्पो सुरु गरेका छौँ । नेपालमा उत्पादन भएका जनशक्तिले अर्काको देशमा गएर पसिना बगाउन नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।
बैंकिङ एक्स्पोका विशेष आकर्षणहरु के–के छन् ?
बैंकिङ एक्स्पोले आजको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर निःशुल्क रुपमा बैंकिङ सूचना प्रदान गरिरहेको छ । एक्स्पोमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, लघुवित्त, रेमिट्यान्स कम्पनी, बीमा कम्पनी, मर्चेन्ट बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, युवा स्वरोजगार कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका ४६ वटा स्टलहरु राखिएका छन् । सबै संस्थाले आफूले दिने सेवा तथा सुविधाका बारेमा स्पष्ट पार्नेछन् । एक्स्पोमा बैंक र बैंकका सेवाहरु, बैंकले लगानी गर्ने क्षेत्रहरु, उद्यमशीलता, बैंकिङ प्रविधिको प्रयोग र यसको प्रभावकारिता, सेयर बजार, बीमा लगायतका बारेमा अन्तक्र्रिया गर्ने अवसर मिल्नेछ । पैसा कमाउने, बचत गर्ने तथा लगानी गर्नेसम्बन्धी जुनसुकै जानकारी बैंकिङ एक्स्पोले दिनेछ । त्यसैले, यदि समृद्ध बन्न चाहनुहुन्छ, स्वदेशमै उद्यमी बन्न चाहानुहुन्छ भने एकपटक बैंकिङ एक्स्पो भिजिट गर्नुस् । बैंकिङ एक्स्पो शनिबार र आइतबार विहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
अब दुई दिन बैंकिङ एक्स्पोमा के–के हुँदैछ ?
शनिबार विहान साढे ११ बजे बैंकिङ लगानी र उद्यमशीलताका बारेमा अन्तक्र्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने साढे दुई बजे बैंकिङ प्रविधिसम्बन्धी अन्तक्रिर्यात्मक कार्यक्रम गरिनेछ । त्यस्तै, आइतबार विहान साढे ११ बजे सेयर बजारसम्बन्धी र साढे दुई बजे बीमा सम्बन्धी अन्तक्र्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यी कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएर सर्वसाधारणले बैंकिङ, बीमा, सेयर बजार, उद्यमशीलता लगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित आफूले जान्न चाहेका जानकारीहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ । यिनै क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरु आएर सर्वसाधारणको जिज्ञासा तथा प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुनेछ ।
प्रायः ग्रामीण तथा दुर्गम भेगका मानिसहरुलाई वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता रहेको भनिन्छ । बैंकिङ एक्स्पो किन राजधानी(सहर)मा आयोजना गरियो ?
काठमाडौँ सहरमा मुलुकका सबै कुनाकाप्चाका जनताहरु छन् । साँच्चै भन्ने हो भने अहिले गाउँमा मानिस नै छैनन्, सबै रोजगारी तथा अन्य कुनै शिलशिलामा सहर पसेका छन् । यस हिसाबले हेर्दा, काठमाडौँमा आयोजना गर्दा जति जनसहभागिता पाइएको छ, त्यो ग्रामीण भेगमा पाइँदैनथ्यो । अनि, वित्तीय साक्षरताको कमी गाउँमा नभएर सहरमा पनि छ । यो कुरा आजको जनसहभागिताले पनि प्रष्ट पारिसकेको छ । काठमाडौँकै मानिसहरु पनि कतिपय साथीभाईसँग सापटी लिएर पैसा चलाउँछन् । आफूले कमाएको पैसा गोजीमै राख्छन् र खर्च गरेर सकाउँछन् । बचत गर्ने तथा लगानी गर्ने बानीको विकास सहरकै मानिसहरुमा पनि भइसकेको छैन । सहरका मानिसले कमाउन जानेको भए पनि बचत गर्न र लगानी गर्न जानेका छैनन् । अनि, बैंकिङ एक्स्पोले सर्वसाधारणलाई थोरैबाट धेरै बनाउन अर्थात पैसा बचत गर्न तथा लगानी गर्न सिकाउने उद्देश्य बोकेको छ । अब विदेश जान्छु भनेर झोला बोकेर सहरसम्म आएका युवालाई गाउँमै फर्केर उद्यम गर्ने बनाउने लक्ष्य बैंकिङ एक्स्पोले लिएको छ ।
तपाईँका आगामी योजनाहरु के–के छन् ? सहरका जनतामा वित्तीय चेतना जगाइसकेपछि अब ग्रामीण भेगमा पनि जाने सोच्नुभएको छैन ?
हामीले गत कात्तिक २६ गतेदेखि वित्तीय जागरण : राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौ । त्यही अभियानअन्तर्गत आज हामीले बैंकिङ एक्स्पोको आयोजना गरेका हौँ । अब यसै आर्थिक वर्षभित्र पूर्व दुई स्थानमा वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम लिएर हामी जाँदैछौँ । आगामी वर्षहरुमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिँदै जाने योजना बनाएका छौँ । हरेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा वित्तीय जागरुकता जगाउने उद्देश्यका साथ हामी लागेका छौँ ।
media international banking expo-2017
सेयर बजारमा घट्दाको पीडा र बढ्दाको खुशी, नेप्सेको आँगनमा साँढेको बुर्कुशी !
अर्थमन्त्री पौडेल र नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत डेप्रेजबीच शिष्टाचार भेटघाट
आइक्यान परिषद्मा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा सिए संघको आपत्ति
रिलायन्स फाइनान्सको बीमासहितको रिलायन्स स्वाबलम्बी बचत खाता संचालनमा
सेयर कर्जाको सीमा घटाउने विषयले बजार तरङ्गित, जानकार भन्छन्-'राष्ट्रबैंकले हस्तक्षेप गर्नु गलत'
चन्द्रसिंह साउदसँगको अन्तर्वार्ता: 'अहिले त सुरुवात मात्र हो,
काठमाण्डौ । दोस्रो बजारको फ्रन्टलाइन रेगुलेटरका रुपमा रहेको नेपाल...
'बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिई र ब्रोकर कमिसन कटौति नगरी हुन्न'
काठमाण्डौ । प्राथमिक बजारलाई देशव्यापी बनाउने, सीआस्वा प्रणाली...
सन्तोष मैनालीको अन्तर्वार्ता, 'सेबोनले ब्रोकर कमिसन घटाए
काठमाण्डौ । स्टक ब्रोकर्स एसोसिएनको २६औं साधारणसभाले सन्तोष...
'हामी निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने र अल्झाउने पक्षमा छैनौं'
चार वर्षअघि तपाइँले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा गोरखा...
नयाँ अंग्रेजी वर्षमा नै नेप्से परिसूचकले रेकर्ड ब्रेक गर्छ:
काठमाण्डौ । सेयर बजारको आफ्नै लय र दिशा हुन्छ । गत बुधबार दशैं...
‘फेरि लकडाउन गरिए रोजगारदाता नै बेरोजगार बन्नेछन्’
कोरोना कहरका कारण जारी बन्दाबन्दीले उद्योगधन्दा सबै ठप्प छन् ।...
चालु वर्षमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक वृद्धिदरमा
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा यहाँका नागरिकको मुख्य...
'अब बजारले ऐतिहासिक छलाङ मार्छ, दैनिक ७ अर्ब कारोबार सामान्य
'काठमाण्डौ । निषेधाज्ञा र कोभिड १९ महामारीका बीच खुलेको धितोपत्र...